आलमको नयाँ चाल : पीडित परिवारलाई नै आफ्नो बचाउमा प्रयोग « Naya Page
आलमको नयाँ चाल : पीडित परिवारलाई नै आफ्नो बचाउमा प्रयोग
प्रकाशित मिति :9November, 2019 6:39 am
रौतहट, २३ कार्तिक । कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको निर्देशनमा १२ वर्षअघि रौतहट राजपुर फरहदवा–४ मा भएको बम विस्फोट र घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएको घटनामा शुक्रबार नयाँ मोड देखा परेको छ ।
इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएका भनिएका ओसी वैदेशिक रोजगारमा गएर नफर्किएको व्यहोरासहितको निवेदन उनले अदालतमा दर्ता गराएकी छिन् । श्रेस्तेदार पराजुलीले भने, ‘मेरो श्रीमान् विदेशमा गएपछि बाँचेको या मरेको खबर नआएको भन्दै उनी अदालतमा आएकी हुन् ।’
पीडितहरूको पक्षमा बहस गरिरहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले पनि पीडितपक्षका एक जनाले बयान फेर्दै अदालतमा निवेदन दिएको पुष्टि गरे । ‘आलम प्रकरणमा बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भयो । तर, बहस नसकिँदै एक जना साक्षी बयान बदल्न बेन्च आइपुगे,’ डा. संग्रौलाले भने ।
डा. संग्रौलाले यसअघि आफूहरूसँगको भेटमा अमनाले पछिल्ला दिन आफू विचलित भएको बताएकी थिइन् । ‘छोराको हत्यारालाई पक्राउ गर्न जाहेरी दिएकी सासु रोक्सना खातुनको पनि हत्या भएपछि आफू विचलित भएको उनले बताएकी थिइन्,’ शुक्रबार अदालतमै आएर बयान बदलिन् ।’ उनको यस्तो निवेदन आउनुमा आलमले पीडितलाई नै आफ्नो बचाउका लागि प्रयोग गर्न थालेको स्थानीय जानकार बताउँछन् ।
राजपुर बमकाण्डको आरोपमा पक्राउ परेका आलमको मुद्दामा थुनछेक बहसको दोस्रो दिन शुक्रबार वादी पक्षको बहस सकिएको छ । आलमलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोटसम्बन्धी कसुर गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरिएको छ । आलममाथि लगाइएका तीन मुद्दामा शुक्रबार वादीपक्षबाट बहस भएको हो ।
वादी पक्षबाट पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थी, सह–न्यायाधिवक्ता रामप्रसाद पन्थी, जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, कुमार खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी, ओमप्रकाश अर्याल, आशिकराम कार्की, मनीषकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पौडेलसमेत १० जनाले बहस गरेका थिए ।
बमकाण्डका वेला रौतहटमा सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी रहेका रामकृष्ण लामाको बयान बाँकी रहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले उनलाई नभेटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । स्रोतका अनुसार लामा अहिले उपचारको सिलसिलामा हङकङमा छन् । नेपाल प्रहरीका एसपी रहेका लक्ष्मण न्यौपानेको भने टीकापुरमा हत्या भएको थियो ।
थुनछेक बहसमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. संग्रौलाले पनि पहिलोपटक प्रहरीको सुरक्षामा बसेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था भोगेको अनुभव सुनाए । पीडितको पक्षमा बहस गरिरहेका वकिलहरू बसेको क्षेत्र वरपर प्रहरी तैनाथ गरिएको पनि बताए ।
अमना अहिले आफ्ना दुई छोरासहित माइतमा बस्छिन् । आर्थिक समस्याका कारण छोराछोरीलाई पढाउन समेत नसकेकी अमनाले बयान बदलेपछि उनीमाथि आलमपक्षले दबाब वा प्रलोभन दिएको अनुमान गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट